Guddoonka BF oo war ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay Af-Barwaaqo – Hornafrik Media Network
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka hadlay dagaal u dhexeeyey labo maleeshiyo beeleed oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug.
“Dagaalka ka soo cusboonaaday Towfiiq iyo Afbarwaaqo waa arrin aan la aqbali karin”. Waxaan ka codsanayaa Guddiga Nabadeynta iyo ciidanka xasilinta ee isku dhafka ah in ay si degdeg ah u kala dhex galaan dadka walaalaha ah ee colaadu dhex martay.” Ayuu qoraalkiisa ku yiri guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya.
Dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanadaas ayaa sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana ku dhintay ku dhawaad 15, halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen.